Ny indostrian'ny fizahan-tany any Swanage dia mijanona ho be fanantenana hatrany ao anatin'ny valanaretina coronavirus
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Ny indostrian'ny fizahan-tany any Swanage dia mijanona ho be fanantenana hatrany ao anatin'ny valanaretina coronavirus
Herinandro maromaro taorian'ny fampiharana ny fetra fanidiana, Mponina UK zatra ny mahazatra vaovao. Vao tsy ela akory izay ny praiminisitra dia nanambara ny fanovana mety amin'ny lalàna mifehy ny fanidiana, indrindra raha toa ka manohana azy ireo ny isa. Mampipoitra ny ahiahy amin'ny tanàna amoron-dranomasina, indrindra any Angletera, izay avelan'ny olona mitondra fiara sy mitsidika eny ivelany.
Ny fanambarana avy amin'ny praiminisitra dia niresaka manokana momba ny asa, ny fanatanjahan-tena ary ny fianarana. Ny indostrian'ny fizahantany dia tsy noresahina, na dia voatonona aza ny sehatry ny fandraisam-bahiny, nilaza fa misy orinasa sasany avela hisokatra amin'ny voalohan'ny volana Jolay. Napetraka ny rafitra fanairana COVID izay hamaritana amin'ny fomba haingana faingana izaitsizy ireo fetra ireo.
Ankafizo ny any ivelany
Ny fepetra fanidiana any Angletera dia tsy mitovy amin'ireo any Wales sy any Ekosy. Nahazo alàlana hitondra sy handeha ho any ivelan'ny trano any Angletera ny mponina. Io dia ahafahan'ny olona eo an-toerana mitondra fiara mankany amoron-dranomasina, manao fanatanjahan-tena ary hamono ny tara-masoandro.
Na dia mety tsara ho an'ny olona any Angletera aza izany dia mety hampitombo ny risika amin'ny fanaparitahana ilay virus. Ny mpanolotsaina Dorset, Laura Miller, dia naneho ny heviny tamin'ny filazany fa ny tanàna amoron-dranomasina any Angletera dia mety hahita vahoaka marobe mivondrona haingana. Saingy ny governemanta dia mandray ny hetsika rehetra azo atao mba hahafahan'ny olona mankafy ny moron-dranomasina toy ny nataony talohan'ny hidin-trano, raha toa ka nandray fiarovana sahaza azy izy ireo. Mila manaraka ny tari-dalana ny tsirairay mba hahazoana antoka fa rehefa mitsidika tanàna amoron-dranomasina toa azy ireo izy ireo Swanage, tsy manao fifanarahana izy ireo ary manaparitaka ny viriosy.
Manantena hatrany ny sehatry ny fizahantany
Noho ny fanovana ny famerana hidy dia antenaina fa hanomboka hitsidika ny UK mandritra ny fahavaratra ireo mpizahatany vahiny. Miala amin'ny fanesoran'ny governemanta tsimoramora ny fameperana, ny sehatry ny fizahan-tany any Swanage dia mahatsapa fa hiverina amin'ny asany haingana kokoa noho ny taty aoriana.
Araka ny Vaovao Swanage, na dia nisy fiantraikany tamin'ny trano fisakafoanana, hotely ary bara akaikin'ny morontsiraka aza ny fanidiana azy, takatry ny tompona orinasa fa ilaina izany mba hisian'ny fiarovana ny tsirairay. Ary ankehitriny, antenain'izy ireo fa afaka manomboka indray ny toekarena eo an-toerana.